Ndi umu Nwanyi Railroad zoro aka na ebe ngosi ihe igba nke Camlik - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean09 AydinRailroad Children Group gbakọtara na Camlik Train Museum
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 09 Aydin, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, Foto, General, Isi akụkọ, Turkey 0
children'smụaka okporo uzo ugbo ala zutere na ebe ngosi nka nke alakụba
Turkey ọtụtụ Demiryolc Children Group òtù ọtụtụ anāchi achi, na obodo nke Selcuk Aydin zutere na ụgbọ okporo ígwè ngosi nka ke obio summerhouse.
Ihe ruru ndị 200 dị na Railroad Children Group, nke ha hibere na mgbasa ozi mmekọrịta, zutere na Museumamlık Steam Locomotive Museum ma were foto ncheta ebe ndị nna ha na ndị nwunye jere ozi n'ihe dị ka afọ 40 gara aga.
Ndi mmadu 200 ndi si n’obodo Afyonkarahisar, İzmir, Uşak, Zonguldak, Konya na Kayseri sonyere na nri ututu nke ndi otu ocho oru otu a bu Serkan Basavul na ndi enyi ya. Ihe dị ka afọ 40 gara aga, ndị bịaranụ kọọrọ ibe ha akụkọ ha na ha tolitere n’etiti ụgbọ oloko a na-ehi ụra. Na-eme ka ncheta ndị otu ahụ nwee ume, oge ụfọdụ na-ebute oge obi. Onye isi otu a, Serkan Basavul kwuru na nkwupụta: “Anyị guzobere otu a ka nna ha, ndị nwunye ha, ndị lara ezumike nka, Ramụ ilmụaka deceasedmụaka nwụrụ anwụ nwụrụ nwere ike izute site n'oge ruo n'oge. N'ihi na ụgbọ okporo ígwè bụ ịhụnanya, ọrụ chọrọ ịchụ aja. Mgbe nna ha na-arụ ọrụ n'ime ọdụ ụgbọ ala Anatolia, ndị enyi ndị a toro na-enwe otu ihe isi ike na ọdụ ndị ahụ, ha nwekwara nsogbu ụlọ akwụkwọ. Ha biri n'ụlọ ọdụdụ n'oge nnukwu oge oyi. Akụkọ ndụ onye ọ bụla dị iche. Anyị na-ezukọ ọtụtụ ugboro n'afọ, anyị nwekwara obi ụtọ. ”
Otu ugbo ala akuko: A Life on Cold Rails 08 / 05 / 2013 Ndụ na Nzuzo Nri Ka ụtụtụ na-amalite, oge oyi na-amalite oge n'etiti ígwè ígwè. Ebe dị anya na 20 kilomita kwa ụbọchị ruo mgbede. Ụgbọ okporo ígwè bụ onye na-elekọta ọtụtụ mpaghara na mpaghara 10-15. Onye na-elekọta ụgbọ okporo ígwè na-elekọta ebe ọ na-ahụ maka ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị, na-ele anya na njide ahụ. Mustafa Dogan (1975), onye malitere ịrụ ọrụ dịka onye ọrụ na State Railways (FDY) na 57, bụ otu n'ime ndị nche ụgbọ okporo ígwè ahụ. Ruo afọ iri abụọ, 85 jere ije otu puku kilomita iji lelee ebe ọ na-elekọta, mana ugboro abụọ iji gaa gburugburu ụwa. Asik Veysel "M na-aga n'okporo ụzọ dị ogologo, m na-aga ehihie na abalị", dị ka a ga-asị na ị na-ekwu, ...
Ndị ọrụ TCDD na ndị na-azụ ụgbọ okporo ígwè na-ezukọ na Nzukọ Mkpakọrịta 22 / 04 / 2019 Turkish State Railways TCDD General Directorate of Transport na ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè rụọ zutere na alo na nzukọ ụlọ. TCDD Nzute General Director Ali Ihsan kwesịrị ekwesị, Vice TCDD General Director Ismail H. Murtazaoğlu, TCDD Transportation General Manager Erol Arikan, TCDD Transportation Deputy Director General Cetin Altun, Railway Transport Association Director General Yasar ụzọ na sonyeere Managing Director nke onwe oru aku ụgbọ okporo ígwè arụmọrụ nke Company. Mmelite nke ụgbọ okporo ígwè arụmọrụ na nzute nwale nke nsogbu chere ihu nketa oke na oru, TCDD General Director Ali Ihsan Presidency nwere kwesịrị ekwesị. "All nke nsogbu gị Kpọtụrụ Onye One nke Anyị" Proper nchikota na TCDD Railway ụgbọ okporo ígwè rụọ ...
Taa na History: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum emeghe 02 / 08 / 2015 Taa, 2 August 1914 mara ọkwa dịka nchịkọta ọnụ, mgbe ahụ, General Directorate nke okporo ụzọ Railroad Railways ejiri ụgbọ okporo ígwè French na Britain. Ndị Germany na ndị Austrian ụlọ ọrụ gara n'ihu. Ụgbọ mmiri Hicaz na-achịkwa n'okpuru ọchịchị ndị agha. N'oge agha ahụ, ụgbọ okporo ígwè ahụ mechiri maka njem ndị nkịtị na njem njem ahụ enweghị ike ịrụ. 2 August 1944 Iwu Nke 20 na 4643 nde akwụmụgwọ maka ọkpụkpụ okporo ụzọ ruo n'ókè Iraq na Iran. 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum meghere.
Çamlık Steam Locomotive Museum (Foto na Foto) 01 / 12 / 2012 Summerhouse Steam Locomotive Museum bụ a ngosi nka na Selcuk maka ndị hụrụ nke ụgbọ oloko na ụgbọ okporo ígwè modelers n'okporo ụzọ (Izmir) mgbe ụzọ gị elu site na pine n'ọdọ banyere xnumxkm obodo. Ke ndidụk obodo n'akụkụ aka nri nke na-eduga ala a nwayọọ grajentị TCDD vetiran uzuoku locomotive na chikọta ndi summerhouse Steam Locomotive Museum 'ka ị pụrụ ịhụ ihe ịrịba ama. Ke akpa ilekiri edoghị n'ime na n'èzí ọnu-uzọ nke ihe ngosi nka ọtụtụ-adịghị ahụ anya n'akụkụ n'okporo ámá, na-na isi n'okporo ụzọ. Atụmatụ na ọ dịghị nnọọ ka m jie ejiji na-akwadebe a obi ụtọ na gburugburu ebe obibi, ọ bụla n'akụkụ green. Inside ngosi nka vetiran mbụ uzuoku locomotives, gụnyere locomotives, cranes ...
Taa na History: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum meghere. 02 / 08 / 2013 Taa, 2 August 1914 mara ọkwa dịka nchịkọta ọnụ, mgbe ahụ, General Directorate nke okporo ụzọ Railroad Railways ejiri ụgbọ okporo ígwè French na Britain. Ndị Germany na ndị Austrian ụlọ ọrụ gara n'ihu. Ụgbọ mmiri Hicaz na-achịkwa n'okpuru ọchịchị ndị agha. N'oge agha ahụ, ụgbọ okporo ígwè ahụ mechiri maka njem ndị nkịtị na njem njem ahụ enweghị ike ịrụ. Iwu 2 1944 20 4643 maka 2 nde ego maka iji wuo ụgbọ okporo ígwè ruo n'ókè Iraq na Iran. 1991 August XNUMX Çamlık Steam Locomotive Museum meghere.
Otu ugbo ala akuko: A Life on Cold Rails
Ndị ọrụ TCDD na ndị na-azụ ụgbọ okporo ígwè na-ezukọ na Nzukọ Mkpakọrịta
Taa na History: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum emeghe
Çamlık Steam Locomotive Museum (Foto na Foto)
Taa na History: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum meghere.
Enwere mmasị na Çamlık Open-Air Locomotive Museum
Taa na akụkọ ihe mere eme: 2 August 1991 Camlik Steam Locomotive Museum ...